HandWallet, une application android pour traquer les dépenses : comments » What if ...
Sunday, February 24, 2013 - 15:23:29
easymoney koa toa ohatrany tsara hono ah !
Monday, February 25, 2013 - 11:01:20
Ny olana kely amin’ity tantara ity koa raha vao zatra mampiasa app anankiray dia manavia ny miova app. Ny données efa voaangona ihany koa sarotra ny mamindra azy amin’ny app vaovao. Afaka samy ampiasaina ihany koa anefa, ny iray hanaovana ny dépenses en général, iray hafa hanaraha-maso manokana activité iray.
Monday, February 25, 2013 - 13:42:12
Easymoney tsy tsara, raha tsy hoe misy $ ngah toi. Version d’essai izy io, afaka 30 andro dia mila mandoa vola amin’izay. Aleo aloha tapitra andramana ny gratuit sy ny ads-funded hafa rehetra vao miditra amin’izany mandoa vola zany :)
Hypocritement vert »
« Polisy misava taratasin'ny fiara